दशैंको मुखमा सवारी साधनमा मनोमानी, यात्रुलाई सधैंको पिरलो::जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
दशैंको मुखमा सवारी साधनमा मनोमानी, यात्रुलाई सधैंको पिरलो
सार्वजनिक सवारी आम यात्रुका लागि ‘खाए खा नखाए घिच’ भनेझैं हुन्छ । अझ चाडपर्वका बेलामा त कसैलाई केहि भनिसाध्य हुँदैन । यसभित्रका समस्या र विकृतिहरु यति धेरै छन् कि कसैले नकार्न नै सक्दैन, तमाम समस्याका वावजुद पनि त्यहि सार्वजनिक सवारी प्रयोग नगरी अर्को विकल्प छैन सर्व साधारणलाई ।
सरकारले निर्धारण गरेको निश्चित शुल्क तिरेपछि सहज र सुरक्षितरुपमा यात्रा गर्न पाउनु यात्रुहरुको अधिकार हो । तर हाम्रा सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रुले त्यो सुविधा पाउने अवस्था छैन । पहाडी भ–ुवनावट, व्यावसायीक ध्येयमा मात्र केन्द्रीत व्यवसायी, बेपर्वाह चालक, असभ्य सह–चालकका कारण यात्रा असहजसँगै थप असुरक्षित बन्दै गएको छ । सार्वजनिक यातायातमा सरकारले नत आफ्नो लगानीमा जनतालाई सेवा दिन सकेको छ, नत सञ्चालनमा रहेका निजी क्षेत्रका सवारीहरुको उचित नियमन गरी जनतालाई आश्वस्त पार्ननै सकेको छ । मुलुकको यातायात क्षेत्र लथालिङ्ग छ, यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि सरकारी नियामक निकाय, भौतिक योजना निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय तथा मातहत यातायात व्यवस्था विभाग छ । त्यहाँ सयौं कर्मचारीहरु नियुक्त गरिएका छन् तर विडम्बना ती निकायका कार्यशैली आम यात्रुमैत्री छैन । कानूनको उचित पालना गराउन राज्य पनि चुकेको छ ।
सार्वजनिक सवारीमा यात्रु ठगिनु, सहज र सुलभ यात्रा गर्न नपाउनेजस्ता समस्याहरु त छँदैछ, तर डरलाग्दो समस्या भनेको असुरक्षित यात्रा हो । ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने गत आर्थिक वर्षमा देशभर चार हजार छ सय ६९ सवारी दुर्घट्ना भएका छन्, जसमा दुई सय २९ गम्भिर प्रकृतिका दुर्घटना थिए भने बाँकी ३४ सय ७७ दुर्घट्ना साधारण प्रकृतिका थिए । अघिल्लो वर्षका ती दुर्घटनामा परि एक सय ४३ जनाले ज्यान गुमाए भने ठूलो संख्यामा पूर्ण तथा आंशिक अपाङ्गताको सिकार बन्न पुगे । नेपालमा सवारी साधनको प्रयोग डरमर्दो बनेको छ । यसको प्रत्यक्ष मारमा सर्वसाधारण यात्रुहरु नै पर्छन् । सार्वजनिक यातायातमा बेथितीका घटनाहरु अनगिन्ति छन् । वर्सेनी सवारी साधनको संख्या थपिए पनि आलोपालो, जोरबिजोर लगायतका व्यवसायी संघहरुको सिन्डीकेट प्रथाका कारण यात्रुले सवारी साधन प्रयोगमा प्रतिस्पर्धात्मक र सुलभ सेवा पाउन सकेका छैनन् । वैज्ञानिक भाडादर कायम गरिएको भएता पनि लामो दूरीका सवारी साधनको भाडादरमा पनि कालोबजारी हुन्छ । सवारी चालकदेखि सहचालकसम्मको अशिष्ट र अमर्यादित आचरणले यात्रा थप बोझिलो बनेको छ । त्यसमाथि आरक्षित कोटाहरु र त्यसमा दिईने छुट त सँधै यात्रु र सहचालकबीचको झगडाको बीऊ बनिरहेको छ ।
चाड पर्वको यात्रा आफ्ना आफन्तजन र आफ्नो ठाउँ पुगिने खुसीमा यात्रुहरु जति पुलकीत हुन्छन् त्योभन्दा बढि पिडादायी यात्राले उनीहरुलाई झस्काउँछ । अर्घाखाँची घरभई हाल राजधानीमा अध्ययनरत अनन्त खत्री दसैंमा घर जाने भनेर निकै उत्साहित छन् तर अघिल्लो वर्ष घण्टौं लाईन बसेर पनि टिकट पाउन नसक्दा सिटको बीचमा राखिएको मुढामा बसेर निकै कठिन साथ घर पुगेको घटनाले उनको मन खल्लो पार्छ । अग्रिम टिकट बुकिङ्गका लागि बसपार्क पुगेकी झापाकी सुनिता टिकट सहजै नपाउँदा दसैं नआएपनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्ने बताउँछिन् । दसंै तिहार जस्ता चाडपर्वका अवसरमा छिटो कमाउने ध्याउन्नले यात्रुहरुको क्षमता भन्दा कयौं गुना बढि यात्रुहरु चढाउने अनि गतिमा प्रतिष्पर्धा गर्दा हालसम्म हज्जारौंले अकालमा ज्यान गुमाईसकेका छन् । यो हरेका यात्रुका लागि अर्को कहालीलाग्दो अवस्था हो । सिन्धुलीका सन्तोष मैनाली बस चढेपछि नओर्लेसम्म सुरक्षित पुगिने हो या हैन भन्ने चिन्ताले सताउने बताउँछन् । चाडपर्वमा देखिने यात्रुको चापलाई व्यवसायीले कमाउने अवसर मात्रै ठान्ने तथा चाप अनुसारको सुविधा दिन अग्रसर नहँुदा लामो दूरीका यात्रुहरुका लागि चाडपर्वको यात्रा कठिन, झण्झटिलो र असुरक्षित बन्दै गएको छ ।
हरेक वर्ष दशैंलाई लक्षित गर्दै सरकार र व्यवसायी संघबीचको छलफलबाट अग्रिम टिकट बुकिङ्गको मिति तय गरिन्छ तर त्यो भन्दा हप्ता दस दिन अघिनै टिकट सकिएको हुन्छ । किन तोकिएको दिन भन्दा पहिलेनै टिकट सकिन्छ भन्दा एक जना यातायात व्यवसायी नाम नखुलाउन आग्रह गर्दै भन्छन्–‘त्यो त ब्लाकमा बेच्नलाई गरिएको बहाना हो, टिकट सकियो भन्दै धेरै रकम असुल्ने गर्छन् केहि साथीहरु ।’ यो हरेक चाडपर्वको समस्या हो, केवल दशंैको मात्र होइन ।
व्यवसायसँग नाफा अवश्य जोडिन्छ, तर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नुभनेको सेवामुखी व्यवसाय पनि हो । यात्रुलाई राज्यले निर्धारण गरेको भाडा लिएर निर्दिष्ट गन्तव्यसम्म सहज, सरल र सुरक्षितरुपमा पु¥याउनु कुनै पनि बस सेवा दिने कम्पनी वा समितिको दायित्व हो । तर व्यवसायीहरुले यो सेवामुखी व्यवसाय हो, मैले नाफा आर्जनसँगै यात्रुहरुको सेवा र सुविधामा पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने गरेको एकदमै न्यून देखिन्छ । उनीहरु जसरी हुन्छ, पैसा कमाउनुपर्छ भनेर मात्रै लागिपरेका हुन्छन् । कतिपय रुटमा सञ्चालन हुने यातायातका साधनमा यात्रुहरु कोचेको देख्दा लाग्छ उनीहरुकै काम नै नाफामा कमाउनेमात्र हो ।
नाफा कमाउनु व्यावसायीक धर्म भएता पनि सेवामुखी व्यवसाय गर्ने सेवाको गुणस्तरमा पनि ध्यान दिन सक्नुपर्छ । व्यवसायीहरुले सवारी साधनमा मात्र लगानी गर्छन् तर त्यो सवारी साधन चलाउने चालक, सहचालकलाई क्षमता वृद्धि, आचरण पालनातर्फ कहिले सोच्दैनन् । एकजना चालक भन्छन्–‘कतिपय अवस्थामा त गाडी मर्मत नगरि चलाउँदा दुर्घट्ना नै हुनसक्ने अवस्थामा पनि साहुको निर्देशनमा जोखिममा यात्रा गर्नुपर्छ ।’ २०६८ असोज २६ मा सिन्धुलीबाट काठमाडौंतर्फ हिडेको बस रिठ्ठेभिरमा खस्दा देशनै स्तब्ध भयो, साहुकै जिद्दीले ब्रेक नबनाई चलाउँदा उक्त घटना भएको भन्ने समाचार बाहिर आयो । नाफाको लोभमा यस्ता दुर्घट्नाहरु धेरै भएका छन् । सवारी नियमलाई मिचेर सिटको बीचमा अनि छतमा पनि खचाखच यात्रु राख्नु व्यवसायीका लागि सामान्य कुरा हो, तर त्यसैकाकारण दुर्घट्नामा परि सयौं यात्रुहरुले वर्सेनी अकालमैं ज्यान गुमाईरहेका छन् । व्यवसायीहरु सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्न तत्पर पनि हुँदैनन्, राज्यको लगानी नभएको र यात्रुहरुमा अन्य विकल्प नरहेको अवस्थाको फाईदा उठाउँदै कतिपय अवस्थामा उनीहरु नाजायज माग पूरा गराउन यातायात बन्द गर्ने, ठाउँ अनुसार मनलाग्दी भाडादर कायम गर्ने, तोकिएको गन्तव्यसम्म नपु¥याई आफुलाई पायक पर्ने ठाउँसम्म लगेर यात्रुलाई ओराल्ने जस्ता गलत कामहरु पनि गर्छन् ।
व्यवसायीले यातायात क्षेत्रका सबै प्रकारका सिण्डीकेट र कार्टेलिङ खारेज गर्ने २०६७ सालको सर्वोच्च अदालतको आदेशको समेत पालना गरेका छैनन् । महासंघ अन्तर्गतका व्यवसायीले गाडी मिलेमतोमा सञ्चालन गर्ने गर्छन् । कुनै नयाँ प्रतिस्पर्धी आउन चाहेमा स्वतन्त्ररुपमा प्रवेश गर्न सक्दैनन् । संघ महासंघको स्वीकृतिपछि मात्र नयाँ व्यवसायीहरु प्रवेश गर्न पाउँछन् । महासंघका समितिले बिमादेखि दुर्घट्नापछिका सबै झण्झटहरुको जिम्मा लिएर चालकलाई निष्फिक्री बनाईदिएका छन् । सार्वजनिक गाडी ३० देखि ५० वर्ष उमेर समूहकाले मात्र चलाउन पाउने व्यवस्था भए पनि सयौं यात्रुसहितका गाडी अपरिपक्व तन्नेरीहरुको हातमा छाडिएको छ । त्यतिमात्र होइन एक ट्राफिक प्रहरी अधिकृतका अनुसारमा नेपालका सडकमा गुडेका आधाभन्दा बढि सावारी साधनको बडी नै मापदण्ड अनुसारको हुँदैन । गाडीको चेसिस र ईन्जिन ल्याएर जहाँ सस्तो पर्छ त्यहिँ लगेर बडी बनाईन्छ । नियमनकारी निकाय यातायात व्यवस्था विभागले पनि गाडीको बडि प्राविधिकरुपमा कतिको सुरक्षित छ भन्ने परिक्षण गर्दैन । विभागले यान्त्रिक परिक्षणनै नगरी बिल बुक मात्र हेरेर गाडीलाई जाँचपास प्रमाणपत्र दिने गर्छ । यसले पनि असुरक्षा बढाएको छ । यसले गर्दा यात्रुहरुले रकम तिरेर पनि जोखिम किन्न बाध्य छन् । त्यसका अवला यात्रुहरुको अधिकार प्राप्तीको अवस्थालाई हेर्ने हो भने जताततै ठगिएका छन् । मनोमानी भाडादर, सिसा नभएका, सिट च्यातिएका, डुङडुङती गन्हाउने बस, अनि त्यसमाथी पनि सिटसम्मै अटसमटस हुनेगरि कतै सामान त कतै यात्रुनै कोच्ने जस्ता समस्याबाट पिरोलिएका छन् यात्रुहरु । तर उनीहरुको हितमा बोलिदिने कसले ? यातायात क्षेत्रमा रहेका यी तमाम समस्या समाधान किन भईरहेको छैन त ? यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक काशीराज दाहाल भन्छन–‘हामी सार्वजनिक सवारीमा पूर्णरुपमा निजी क्षेत्रको लगानीको भर परेका छौं, त्यसो हँुदा पनि व्यवसायीहरुको हालीमुहाली चलेको हो, हामी त्यसमा नियन्त्रण गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौं ।’
कति सवारी साधन दर्ता भएका छन् त हालसम्म
सवारी साधन आयातको क्रम दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । सडकमा सवारीको चाप प्रत्येक दिन बढ्दो छ । वार्षिकरुपमा यातायात व्यवथा विभागमा दर्ता भएको सवारी साधनको संख्या हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७०/७१ सम्मको तथ्याङ्क यसप्रकार छ ।
सवारी दर्ताको गत आर्थिक वर्षको यो तथ्याङ्कसँगै आर्थिक वर्ष २०४६/४७ देखि वार्षिकरुपमा कति सवारी साधनहरु दर्ता भएका छन् त ? वार्षिक सवारी दर्ताको वृद्धि प्रवृति कस्तो रहेछ भनेर तथ्याङ्क खोज्ने क्रममा यस्तो आँकडा भेटियो ।
आर्थिक वर्ष २०४६/४७ दखि आर्थिक वर्ष २०७०/७१ सम्ममा सवारी दर्ता अंकगत तथ्याङ्क।
यो सवारी दर्ताको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिरहँदा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ कि यो व्यवसायमा अर्बाैं रुपैयाँ लगानी भएको छ । यो व्यवसायमा केवल समस्या मात्रै पनि छैन । यस क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्रमा पनि महत्वपूर्ण योगदान दिँदैआएको छ । रोजगारी सिर्जना तथा आम जनताको यात्रामा सहजता प्रदान गर्ने बाहेक देशको अर्थतन्त्रमा राजश्वको माध्यमबाट पनि महत्वपूर्ण योगदान दिईरहेको छ । राज्यले जनताको सेवामा लगानी गर्न नसकेको अवस्थामा निजी क्षेत्रबाट यो क्षेत्रमा जुन लगानी भएको छ, यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । व्यवसायमा लगानी गरेपछि मुनाफाको आस गर्नुपनि नाजायज भने अवश्य हैन । उज्याला पक्षहरु पर्याप्त हुँदा हुदैपनि धेरै आलोचना हुनुका पछाडी यो व्यवसायले प्रत्यक्षरुपमा सेवाग्राहीसँग साक्षात्कार गर्नुपर्ने र व्यवस्थापकीय पाटोलाई सुदृढ पार्न नसक्नुनै हो । यातायातको क्षेत्रबाट विभिन्न आर्थिक वर्षहरुमा संकलन भएका राजश्वको तथ्याङ्क ।
स्रोत: यातायात व्यवस्था विभाग
यातायात क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी कति छ भन्ने कुराको आँकलन देशभर रहेका यातायात व्यवसायी संघहरुको यो आँकडाले अझ मदत गर्दछ । हाल नेपाल यातायात महासंघ अन्तर्गत विभिन्न यातायात संघहरु रहेका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले यातायात व्यवसायी र मजदुरका हक हीतका लागि भनेर सयभन्दा बढी संघ खोलेको छ, तर यसले आम यात्रुलाई कसरी सहज र सुरक्षित यात्रा गराउन सकिन्छ भनेर ध्यान पु¥याउनमा कन्जुस्याईं गरेको प्रष्टै देख्न सकिन्छ । महासंघको तथ्यांक हेर्ने हो भने मेची अञ्चलमा २१, कोशी अञ्चलमा १९, सगरमाथा अञ्चलमा ६, जनकपुर अञ्चलमा ३९, बाग्मती अञ्चलमा ८३, गण्डकी अञ्चलमा २०, राप्ती अञ्चलमा ११, लुम्बिनी अञ्चलमा १४, कर्णाली अञ्चलमा ६, महाकाली अञ्चलमा ४, भेरी अञ्चलमा ११, धौलागिरीमा ६ वटा संघहरु रहेका छन् ।
यातायात आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । यातायात विनाको जिवन अकल्पनीय बनिसकेको छ । तसर्थ यो क्षेत्रका समस्याहरुको निराकरण गर्दै यातायात सेवालाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । अर्बाैंको लगानी गरेका निजी क्षेत्र र यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको नियामक निकायले एक अर्कामा आरोप लगाएर होइन, समन्वयकारी भुमिका निर्वाह गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।
ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने गत आर्थिक वर्षमा देशभर चार हजार छ सय ६९ सवारी दुर्घट्ना भएका छन्, जसमा दुई सय २९ गम्भिर प्रकृतिका दुर्घटना थिए भने बाँकी ३४ सय ७७ दुर्घट्ना साधारण प्रकृतिका थिए । अघिल्लो वर्षका ती दुर्घटनामा परि एक सय ४३ जनाले ज्यान गुमाए भने ठूलो संख्यामा पूर्ण तथा आंशिक अपाङ्गताको सिकार बन्न पुगे ।
मनोमानी भाडादर, सिसा नभएका, सिट च्यातिएका, डुङडुङती गन्हाउने बस, अनि त्यसमाथी पनि सिटसम्मै अटसमटस हुनेगरि कतै सामान त कतै यात्रुनै कोच्ने जस्ता समस्याबाट पिरोलिएका छन् यात्रुहरु, तैपनि घरजाने सीट पाईंदैन, सर्वसाधारण त के, सभासदसम्मले टीकट पाएका छैनन् ।